खानेपानीको समस्या समाधान गर्छौँ : रामबाबु महत - Headline Nepal - Online News Portal from Nepal | Latest Nepal News from politics, sports, entertainment, society, world, technology, opinion, interview, Nepali movies, fashion, life style, tourism, international news, national news, economy, science, music, live news events, live sports events
खानेपानीको समस्या समाधान गर्छौँ : रामबाबु महत
Posted by Chintan | १७ चैत्र २०७५, आईतवार १४:४१ |
ललितपुर महानगरको दक्षिण भागमा अवस्थित वडा नम्बर–१४ मा मिश्रित बस्ती छ । केही वर्षअघिसम्म शान्त र सफा देखिने यस क्षेत्रमा बस्ती बढेसँगै सडक, ढल, पानी, फोहोर व्यवस्थापनलगायत समस्या थपिएका छन् । वडाका योजना, समस्या समाधानमा भएका पहललगायत विषयमा वडाध्यक्ष रामबाबु महतसँग गरेको संवाद :
वडाका काम कसरी गरिरहनुभएको छ ?
मैले चुनावका वेला प्रचारमुखी घोषणा केही पनि गरिनँ । स्थानीयले मलाई पञ्चायतकालदेखि गरेको काम हेरेर निर्वाचित गराउनुभयो । मैले प्रचारमुखी चुनावी प्रतिबद्धता जनाइन भन्दैमा जनताको काम नगर्ने भन्ने होइन । अहिले हामीसँग करिब चार करोड बजेट छ । त्यति बजेटले विकास निर्माणका काम तुरुन्तै पूरा गर्न सकिँदैन । त्यसमाथि कानुनी प्रक्रिया पनि पु-याउनुपर्ने हुन्छ । वडास्तरीय बजेटले विकास निर्माणका काम भइरहेका छन् । निर्वाचित भएपछि फोहोर व्यवस्थापनको काम पहिलो हुने बताएको थिएँ । सोहीअनुसार काम गरेको छु ।
जनता त फोहोरको समस्या विकराल भएको बताउँछन् । शिवशक्ति पेट्रोल पम्पअगाडि फोहोरले दुर्गन्ध फैलिएको, फोहोर व्यवस्थानको गाडी नियमित नआएकोजस्ता गुनासा छन् नि ?
हामीले त्यहाँ (शिवशक्ति पेट्रोल पम्प) मा फोहोर नफाल्न अनुरोधसहितको सूचनाबोर्ड राखेका छौँ । थुप्रैपटक सुरक्षागार्डसमेत खटाएर फोहोर व्यवस्थापन गरेका छौँ । तर, विडम्बना मान्छेमा चेतना नभएसम्म नहुँदोरहेछ । मानिसहरू रातको १२ बजे, २ बजे फोहोरका झोला र पोकाहरू फाल्दा रहेछन् । अब सिसिक्यामेरा जडान गर्दै छौँ । कसैले फोहोर फाले एकपटक चेतावनी दिन्र्छौं । अर्कोपटक पनि फोहोर फालेको भेटिए जरिवाना गर्छौं ।
पानीको समस्या पनि देखिन्छ । वडाका जनताले सहज रूपमा पानी कहिलेसम्म पाउँछन् ?
पक्कै पनि पानीको समस्या छ । म ०३९ मा निर्वाचित हुँदा ५५ घर थिए । मेरै पहलमा त्यतिवेला चार इन्चको पाइप प्रयोग गरी पानी आपूर्ति भएको थियो । तर, अहिले बस्ती बढेको छ । करिब आठ हजार घर छन् । पानीको पाइप र धारा थपिए पनि स्रोत थपिएको छैन । त्यसैले, पानीको अभाव छ । पानीको समस्या समाधान गर्न प्रतिनिधिसभा सदस्य पम्फा भुसालसँग कुरा राखेको छु । उहाँले बोरिङ गरेर पानीको व्यवस्थापन गर्ने योजना कार्यान्वयन गर्न सहमति जनाउनुभएको छ ।
मन्त्रालयबाट करिब चार करोड बजेट निकासा गराएर पानीको समस्या समाधान गर्छौं । प्रदेश सरकारसँग पनि यस विषयमा कुरा भएको छ । पानीको समस्या समाधानको उपयुक्त विकल्प मेलम्चीको पानी नै हो । त्यसका लागि विभिन्न ठाउँमा पाइप बिच्छाउने काम हुँदै छ । पानी व्यवस्थापनको काम चालू आर्थिक वर्षमा सुरु भई अर्को आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुन्छ ।
वडामा सडकबत्ती पनि देखिँदैन । जसका कारण बेलुका आवतजावत गर्दा असुरक्षित हुने स्थानीयको गुनासो छ नि ?
सडकबत्तीका लागि वडासँग करिब सात लाख बजेट छ । हामीले सडक बत्तीका लागि आवश्यक सामग्री खरिद थालिसकेका छौँ । वडा कार्यालय, ताल्चीखेल पिपलबोट, नखिपोटमा सडकबत्ती जडान भइसकेको छ । अन्य ठाउँमा पनि जडान गर्दै छौँ । त्यसपछि सडकबत्तीको समस्या रहनेछैन ।
रिङरोड आठ लेनको भए पनि भित्री सडकमा भने जामको समस्या झन् बढ्दो छ । त्यसमाथि नखिपोट–महालक्ष्मीस्थान–थसीखेलमा फुटपाथ पसलले हिँड्नै नसकिने अवस्था बन्छ । यी समस्या समाधानका लागि के सोचिराख्नुभएको छ ?
हाम्रो देशमा विकास निर्माणको काम गर्दा कमिसनको खेल हुन्छ । चीनले बनाएको सडक पनि अवैज्ञानिक छ । चीनले बाटो बनाउँछु भन्यो, नेपाल सरकारले सम्झौता ग¥यो । तर, आवश्यक ठाउँमा अकासे पुल, जेब्राक्रसिङ, ट्राफिक लाइट कहाँ–कहाँ बनाउने भन्ने नै छैन । लेन परिवर्तन गर्ने ठाउँ पनि पर्याप्त छैन । जसको असर भित्री सडकमा परेको हो । जहाँसम्म फुटपाथको कुरा छ, हामीले सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई हटाउन पत्र पठाइसकेका छौँ । फुटपाथलाई व्यवस्थित गराउनेछौँ ।
Previousपृथकतावादी भूत र अस्थिरताको बादल
Nextत्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दैनिक १० घण्टा बन्द
३१ बैशाख २०७५, सोमबार १३:५८
११ कार्तिक २०७५, आईतवार २१:००
बजेट भित्रका अन्य विषयमा नभइ बृद्धाभत्ताको विरोध किन ?
२० जेष्ठ २०७३, बिहीबार १८:०७